Foshan SitZone Furniture Co., Ltd. oo la aasaasay sannadkii 2009, waa soo saaraha qalabka guriga khaas u ah kuraasta xafiiska iyo sooffa.
Shirkadda habaysan alaabta guriga iyo Shiinaha wax magaalada muhiimka ah --- Longjiang, Shunde, By samaynta isticmaalka qalabka maxaliga ah ceeriin iyo khayraadka aadanaha, faa'iido, Shirkadda diiradda kursi xafiiska oo aan la ugu dhammaado ee. By kugula xirfadeed ee ruux ee ku dadaalaya si kaamil ah iyo dabeecad wanaagsan macaamiisha-horeyn adeegga, waxaan ku adkayn sumcad wanaagsan ee Warshadaha isla, oo waxay leeyihiin faa'iido cad ee tartan rasmi ah ee qaab ratio qiimaha sheyga.
Tan iyo markii shirkadda la aasaasay, Sitzone si degdeg ah u koraa in ay tahay arrin ka mid ah awoodda wax soo saarka ama talanti. Under weeyn ee si adag gacanta tayada. Waxaan ku siin macaamiisheena la kaamil ah ka dib markii adeeg sale. Isla mar ahaantaana, waxaan sii wadi doonaa si ay u horumariyaan beerta design ah, in la keeno hal abuur cusub, iyo koboca in waxyaabaha our.
SitZone Furniture wadi doontaa in ay u hoggaansamaan fikradda maareynta hayo ka hor abuurta, adeegga daacad ah, si ay u adeegno si ay macaamiisha kasta oo partner.We iskaashi soo dhoweeyeen saaxiibadoodii ka guriga iyo adduunka oo dhan in ay soo booqdaan oo kala hadal us.We sugaynaa in la dhiso muddo dheer iskaashiga faa'iido iyo daacad ah oo ku faraxsan is kula!